ရှောင်ရမယ့် စကားအသုံးအနှုန်း ၅၀ - အပိုင်း ၄ - Myanmar Network
ရှောင်ရမယ့် စကားအသုံးအနှုန်း ၅၀ - အပိုင်း ၄
Posted by Language Republic on November 14, 2012 at 18:14 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၃၁။ Invited guests - ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်များ - guest ဧည့်သည်ဆိုတာ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုမှာ ဖိတ်မှလာရတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် invited ဖိတ်ကြားထားသော လို့ ထပ်ပြောနေစရာ မလိုဘူး။
၃၂။ Major breakthrough - ကြီးမားသော အဓိကတိုးတက်အောင်မြင်မှု
Breakthrough တိုးတက်အောင်မြင်မှုဆိုတာ ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးမှ ရလာတဲ့ အရေးပါတဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် major ကြီးမားသော ထည့်သုံးခြင်းအားဖြင့် အဓိပ္ပာယ် တိုက်ရိုက် ထပ်မနေပေမယ့် ပိုနေပါတယ်။
၃၃။ [Number] a.m. in the morning/p.m. in the evening - အချိန်နာရီ ဖော်ပြတဲ့ ၁၂နဲ့ ၁၂အောက် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကို a.m. နံနက် သို့မဟုတ် p.m မွန်းလွဲညနေ နဲ့ တွဲသုံးရင် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် “in the morning” တို့၊ “in the evening” တို့ မလိုအပ်တော့ဘူး။
၃၄။ Past history/record - အတိတ်သမိုင်းပြီးခဲ့သော မှတ်တမ်း
History သမိုင်းဆိုတာ အတိတ်က ဖြစ်စဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ record မှတ်တမ်း ဆိုတာ ဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေကို စာနဲ့ပေနဲ့ ရေးမှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ကပြီးခဲ့သော လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ past ကို ထည့်သုံးဖို့ မလိုတော့ဘူး။
၃၅။ Plan ahead - ကြိုတင်အစီအစဉ်ရေးဆွဲ
Plan အစီအစဉ်ရေးဆွဲတာဟာ အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ahead ကြိုတင် ဆိုတာ ပါစရာမလိုဘူး။
၃၆။ Possibly might - ဖြစ်မယ်ဆို ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်
Might ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဖော်ပြတယ်။ ဒါကြောင့် possibly ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကို ထည့်စရာ မလိုဘူး။
၃၇။ Postpone until later - နောင်အခါအထိ ရွှေ့ဆိုင်း
Postpone ရွှေ့ဆိုင်းတယ်ဆိုရင် အခုမလုပ်တော့ဘူး နောင်မှ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် until later ပိုနေပါတယ်။
၃၈။ Protest against - ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာ ဆန့်ကျင်ကြောင်း သိအောင် လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ against ဆန့်ကျင် ဆိုတဲ့ စကားလုံး မလိုအပ်ဘူး။
၃၉။ Repeat again - နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်လုပ်
Repeat ဆိုတာ နောက်တစ်ကြိမ် အဓိပ္ပာယ် ပါပြီးသားပါ။ again မလိုအပ်တော့ဘူး။
၄၀။ Revert back - နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်
စောစောပိုင်းအနေအထားအတိုင်း ပြန်ဖြစ်တာကို Revert လို့ သုံးပါတယ်။ back မလိုအပ်ဘူး။
Permalink Reply by Tharya Khin on November 16, 2012 at 15:18
Thanksalot for this post. Looking forward to......
Permalink Reply by kohtuusann on November 16, 2012 at 15:25
ကျွန်တော်သိလို့တတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား။ ဒါပေမယ့် "invited guest(s)" ဆိုတဲ့သုံးအနှုန်းဟာရှိတယ်လို့နားလည်ထားလို့ပါ။
ကိုယ့်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ အရေအတွက်အတိအကျထက် သူတို့က ထပ်ပွားပြီးအဖေါ်ခေါ်လာတဲ့ ဧည့်သည်ကို လက်ခံမပေးနိုင်ဘူး နေရာမပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာကို သိသာအောင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးကြိုတင်အသိပေးထားချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ သာမာန် guest(s) အစား invited guest(s) (only) ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သုံးတယ်လို့နားလည်ထားမိလိုပါ။
Read more: ရှောင်ရမယ့် စကားအသုံးအနှုန်း ၅၀ - အပိုင်း ၄ - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%...
Permalink Reply by padout,layy on November 16, 2012 at 22:46
thank for sharing... teacher
Permalink Reply by K Lwin on February 13, 2015 at 15:46
အကို ထောက်ပြချက်လေးကို သဘောကျမိပါတယ်.... Thanks...
Permalink Reply by Soe Myint Than on November 16, 2012 at 16:43
Permalink Reply by chocho tun on November 16, 2012 at 22:39
Permalink Reply by Ratan Biswas on November 17, 2012 at 8:09
Permalink Reply by Ye Htet Naing on November 17, 2012 at 10:43
Permalink Reply by hsu mon aye on November 17, 2012 at 13:30
thanks ur post
Permalink Reply by Thike Htun on November 17, 2012 at 13:30
Permalink Reply by Kevin Hung on November 17, 2012 at 22:06
ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာ။ ဒီလို အသုံးအနှုန်း ပုံမကျတာလေးတွေကို တော်ရုံဆို သတိမထားမိဘူး။
Permalink Reply by pan si on November 23, 2012 at 13:20
Thanks..a lot for sharing and i want to know....kohtunnsann's Suggestion .guest & Invited guests..